Budata Euro Truck Simulator 2 Speed Patch maka Windows
Budata Euro Truck Simulator 2 Speed Patch
Free Budata maka Windows (4.2 MB)
Budata Euro Truck Simulator 2 Speed Patch,
Euro Truck Simulator 2 Speed ​​Patch bụ patch bara uru nke ukwuu na -akwadoro idozi nsogbu ịgba ọsọ, nke nwere ike bụrụ ihe kacha enye ndị egwuregwu ETS 2 nsogbu. Euro Truck Simulator 2, nke bụ ịme anwansị kacha ewu ewu nụwa, ndị egwuregwu nwere ekele maka eserese ya na nkọwa ndị ọzọ. Mana obere nkọwa ụfọdụ na -enye ụfọdụ ndị egwuregwu nsogbu, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ndị egwuregwu niile. Dịka ọmụmaatụ, ọ nwere ike iwe gị na ndị na-egwu ọsọ ọsọ enweghị ike iji gwongworo ha gafere 90 km kwa elekere nihi oke ịgba ọsọ na egwuregwu. Ekele maka patch mepụtara iji merie nke a, ị nwere ike jiri gwongworo gị gafere 90 nokporo ụzọ dị netiti.
Ewezuga ịga ngwa ngwa, sistemụ breeki dị mkpa iji kwụsị gwongworo na -agba ọsọ a dịkwa nime patch. Ọ dị mma, ọ bụrụ na ị na -ajụ ego ole m nwere ike iji gwongworo m mgbe m wụnye patch, ọ ga -aba uru ịza azịza ya ozugbo. Mgbe nbudata ngwugwu ahụ, ị ​​nwere ike iru ọsọ nke kilomita 300 ka ị na -ebu gwongworo gị na gwongworo gị. Onu ogugu a, nke dị elu maka gwongworo, bụ nrọ nke ọtụtụ ndị egwuregwu, nagbanyeghị na ọ bụghị ihe nkịtị.
Pịa ebe a ka ibudata Euro Truck Simulator 2 nefu!
Ọ ga -ezuru itinye faịlụ patch ebudatara na C: \_ Ndị ọrụ \_ pịnye aha kọmputa gị ebe a \_ Documents \_ Euro Truck Simulator 2 \_ mod na folda akwụkwọ kọmputa gị. Mgbe ahụ ị nwere ike iji gwongworo gị ngwa ngwa site na ịbanye egwuregwu ahụ.
Ngwa ndị emetụtara: Budata Euro Truck Simulator 2
Euro Truck Simulator 2 Speed Patch Ụdịdị
Nha faịlụ: 4.2 MB
Mmepụta: SCS Software